सानो उमेरमा यौन सम्पर्क राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न ? डक्टर खेम कार्कीको जवाफ - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
सानो उमेरमा यौन सम्पर्क राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न ? डक्टर खेम कार्कीको जवाफ
२ मंसिर,२०७३ | Forseenetwork
१८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालीका भनेर परिभाषित गरिएको छ । किन भने १८ वर्ष सम्मको उमेरसम्म हाम्रो शरीरको बृद्धि विकास पूर्ण रुपमा भईसकेको हुँदैन । त्यसैले यो उमेर समूहको व्यक्तिलाई बालबालीकाको समूहमा राखिएको हो । यो उमेरमा शारीरिक,मानसिक विकास हुन्छ । सानो उमेरमा यौन सम्पर्क गर्दा योनाङगमा घाउ हुन सक्छ । यो उमेरमा यौन सम्पर्क गर्दा चोट पटक वा रोगको किटाणु सजिलै सर्न सक्छ । त्यसैले सानो उमेरमा यौन सम्पर्क गर्दा आँखाले देख्न नसक्ने खाले घाउहरु लाग्ने हुँदा रोग सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । सानो उमेरमा यौन सम्पर्कलाई सुरक्षित बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । सानो उमेरको यौन सम्पर्क प्राय असुरक्षित हुन्छ । चाहना नहुँदा—नहँुदै गर्भ हन सक्छ । जति यौन आनन्द प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो सानो उमेरमा यौन सम्पर्क गर्दा हुन्न । मानसिक तनाव हुने पनि हुन्छ । गर्भवती हुने होकी भन्ने डरले गर्दा यौन आनन्द प्राप्त नहुने हुन्छ । यस्तो बेलामा यौन सम्बन्धी मानसिक समस्याहरु पनि निम्तीन सक्छन् ।
मनसिक समस्या भएपछि पढ्न मन नलाग्ने । पढाई भएन भने सबै अवसरहरु गुमाउनु पर्ने हन्छ । मानिसको जीवनमा खासै परिवर्तन हुन्न । आफूसंगैको साथीहरुले राम्रो काम गरेको देख्दा नराम्रो लाग्छ । अनि यौनलाई गलत तरिकाले बुझ्न थालिन्छ । सानो उमेरमा यौन सम्पर्क गर्दा गलत भयो भने जीवनमानै समस्या पर्ने कारण त्यो व्यक्तिले पनि आफ्नो साथीलाई यौन सम्पर्क भनेको गर्नु नहुने रैछ पापनै रैछ भन्ने गलत धारणाको विकास हुन सक्छ । त्यसैले सानो उमेरमा विना तयारी हतारियर यौन सम्पर्क गर्न खोज्नुभयो भने धेरै बेफाइदा हुन्छ ।